प्रतिष्ठान निर्माण गर्न सात अरव लाग्ने « Farakkon
प्रतिष्ठान निर्माण गर्न सात अरव लाग्ने
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठिानको भवन अबको दुई वर्ष भित्रमा निर्माण पुरा हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।आइतवार घोराहीमा आयोजित सर्वदलिय सर्व पक्षिय भेलामा प्रतिष्ठिानकी उपकुलपति डा. संगीता भण्गारीले दुई बर्ष भित्रै प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक अत्याधुनिक भवन तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिइन ।
१ सय १४ रोपनी क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक र सबै प्रकारको सेवा सुबिधा दिने गरि भवनको नक्साङ्कन गरिएको उपकुलपति भण्डारीले बताइन । जसमा एअर एम्वुलेन्सको लागि समेत परिकल्पना गरिएको छ ।
उपकुलपति डा. भण्डारीले उक्त भवन निर्माण गर्नका लागि झन्डै सात अरव रुपैंया लाग्ने अनुमान गरिएको बताइन । पश्चिम नेपालकै नमुना अस्पताल बनाउने सोचका साथ काम अगाडि बढाउने भण्डारीले योजना सुनाइन । ‘आगामी वर्षदेखि नर्सिङ पढाई सुरु गर्छौं । हाल धमाधम रिक्त पद परिपुर्ती गर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।’ उपकुलपति भण्डारीले भनिन । त्यस्तै उनले केही अतिआवश्यक विषयगत विषशेज्ञ डाक्टरहरु नियुक्तिको काम प्रतिष्ठानले सुरु गरेको उनले बताइन । ‘जव भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पुरा हुने र आवश्यक सबै डाक्टरहरु नियुक्त हुनेछन् त्यसपछी दंगाली जनताले संधै उपचारको लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने छ ।’ भण्डारीले भनिन् । एक साता पहिले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गरिएको भन्दै सबै दाङबासीले प्रतिष्ठानको विकासमा सघाउन उनले आग्रह गरिन ।
विकास निर्माणमा राजनीति कसैले गर्न नहुने दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । नेपाली काँग्रेस दाङका सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले जिल्लाका सरकारी अस्पतालहरुले जनताको चाहाना बमोजिम सेवा दिन नसक्दा अस्पताल हुन कि रेफर केन्द्र हुन भनि छुट्याउन मुस्किल परिरहेको बताए । ‘संधै विहान एक्वुलेन्सले साईरन दिदै बाँके वा बुटवल तर्फ हुइकिदै गरेका एम्वुलेन्सहरु कहिले रोकिने हुन ।’ उनले प्रश्न गरेका थिए । त्यो रोक्नको लागि भएपनि प्रतिष्ठिानको तीव्र गतिमा विकास आवश्यक रहेको उनले बताए ।